Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Severin: Ndị njem na-amasịkarị na ụgbọ oloko 300 kwa ụbọchị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Severin: Ndị njem na-amasịkarị na ụgbọ oloko 300 kwa ụbọchị
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụlọ nkwari akụ Severin
Ụlọ nkwari akụ Severin mbụ mepere na 1913 mgbe ọ nọchiri Grand Hotel nke Indianapolis. Ọnọdụ ya kpọmkwem n'ofe Jackson Place site na Union Station mere ka ọ bụrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị amasị ndị njem na ụgbọ oloko 300 kwa ụbọchị.
Ọ bụ Henry Severin, Jr., bụ onye ga-eketa ihe nri nri, site n'enyemaka sitere n'aka ndị mmepe ụlọ Carl Graham Fisher na James A. Allison wuru ya.
Fisher na Allison wuru okporo ụzọ moto nke Indianapolis ama ama.
Ọ bụ Vonnegut na Bohn, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụkpụrụ ụlọ na-arụ ọrụ na Indianapolis na etiti narị afọ nke 20 mere ya.
Mgbe Bernard Vonnegut, Sr. nwụrụ na 1908, ọ nọchiri ya nwa ya nwoke Kurt Vonnegut, Sr. bụ onye mechara bụrụ nna Kurt Vonnegut, Jr., onye edemede a ma ama.
Ewubere Grand Hotel na 1876 ma, n'otu oge, Thomas Taggart bụ onye nwechara ụlọ oriri na ọṅụṅụ French Lick Springs. Taggart mechara bụrụ onye isi obodo Indianapolis na onye omebe iwu US si Indiana.
Na February 19, 1905, ọkụ malitere n'ụlọ nnukwu nnukwu ụlọ ahịa Fahnley & McCrea, gbasaa na ụlọ asatọ dị nso gụnyere Grand Hotel, mgbe ahụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ kasị ukwuu na Indiana. N'ime nkeji iri anọ na ise, ụlọ asatọ dị na mpaghara ahụ egwu egwu ebibiela kpamkpam. Ọ bụ ezie na etinyere mfu ihe onwunwe ahụ na $1.1 nde, ọ dabara nke ọma zọpụta Grand Hotel site na nnukwu mmebi.
Ụlọ nkwari akụ Severin nwere ọnọdụ dị egwu na mbara igwe Mpaghara N'ogbe na-ele anya Union Station na ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị agbata obi. A na-arụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ dị okpukpu iri na abụọ site na friji siri ike nke nwere mgbidi brik. Rectangular na atụmatụ, ọ bụ ọnụ mmiri iri na otu n'obosara n'akụkụ West Georgia Street yana ọnụ mmiri ise n'akụkụ South Illinois na McCrea Street. A haziri ala abụọ mbụ ka ọ bụrụ atụmatụ Renaissance nke nnukwu windo arch. Site n'ala nke atọ ruo n'ala nke iri na abụọ, windo akụkụ anọ na-agbaso ụkpụrụ grid otu.
Ọtụtụ ndị nwe dị iche iche jisiri ike na họtel ahụ ruo mgbe Warren M. Atkinson zụtara ya na 1966 onye kpọrọ ya Atkinson Hotel. N'afọ 1988, Mansur Development Corporation zụtara ụlọ oriri na ọṅụṅụ na, mgbe mweghachi $ 40, gbanwere aha ya Omni Severin Hotel. N'ime oge mweghachi ahụ, e wuru ụlọ elu ọhụrụ abụọ nwere okpukpu iri na abụọ ma jikọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ gbasaara na Circle Center Mall na ebe mgbakọ ahụ.
Nnukwu ọnụ ụlọ mbụ dị na ụlọ ịgba egwu Severin taa. Ahụrụ ụgbọ okporo ígwè ndị a na-achọ mma na-efu efu n'elu ọnụ ụlọ ahụ n'ọba dị kilomita 30 site na họtel ahụ ma tinye ya na ebe mbụ ha nọ. Igbe ozi ọla kọpa nke 1913 ka na-arụ ọrụ dị ka igbe ozi na-arụ ọrụ ruo taa. Ndị mbụ siri ike mahogany ụlọ ndị ọbịa dị na mbuli elu ọ bụla. N'ime Severin Ballroom, ọmarịcha chandelier kristal Austrian na steepụ marble dị egwu na-echeta akụkọ ihe mere eme nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ. Edepụtara ụlọ oriri na ọṅụṅụ Omni Severin na National Register of Historic Places ma bụrụ onye otu Ụlọ oriri na ọṅụṅụ America.